Iyo Antithesis Yezvese Zvemagariro? Chaizvoizvo? | Martech Zone
Iyo Antithesis Yezvese Zvemagariro? Chaizvoizvo?
Muvhuro, Nyamavhuvhu 16, 2010 Muvhuro, Zvita 29, 2014 Douglas Karr
Wow, ichi chirevo kubva Avinash pane chipoko:
Kana iwe usina nguva yeku blog saka usadaro. Ghost blogging ndeyechokwadi & antithesis yezvose zvemagariro. #dontbeafake cc @mitchjoel
Izvo zvinogara zvichinakidza kana mumwe munhu aine masimba akawanda se Mitch or Avinash anokanda kunze a mutongi sezvizvi. Kwete chete ini handibvumirane naAvinash, ndinoziva akawanda, makambani mazhinji aisazobvumawo. Ghostblogging hakusi kupokana kwezvose zvemagariro… inauthenticity, kusatendeseka, uye kusavimbika ndiyo inopesana nezvose zvemagariro.
Makambani akaendeswa kuti aite zvakati wandei pasina zviwanikwa zvakakodzera pamusoro pemakore. Accenture munguva pfupi yapfuura yakaita ongororo yakaratidza izvo kukwana mabhajeti, kushomeka kwehunyanzvi, uye maturusi asina kukwana ndiwo anofambisa masimba ekushambadzira madhipatimendi achitadza.
Ko kana kambani yako isina bhajeti, isina hunyanzvi kana isina maturusi eku blog? Nekudaro, yako kambani ine chishuwo chekushambadzira zvese zviri zviviri ruzivo rwekugovana uye inoshamisa vatengi nyaya online. Ivo vanogona kuita izvi zvisingadhuri nema ghostblogger - avo vanonzwisisa kunyora nemazvo, mashandisiro emazwi akakosha, uye vane maturusi avanoda kuongorora kubudirira kwemutengi. Ghostblogger inogona kukwanisa kuzviita zvirinani, nekukurumidza, uye nemhedzisiro yakakura.
Ndine mamwe mabloggi pa Martech Zone izvo zvandakaita chipoko ye… nekuti vakaramba vachindiudza kuti havana nguva. Nekudaro, ndakavatumira tsamba inechokwadi mubvunzo wavaive neruzivo nawo. Ivo vakanyora kudzosera mhinduro nezvimwe zviwanikwa pamhepo zvinogona kubatsira. Ini ndakazotora email yavo, ndikaisazve zita rekuti ive inoshanda blog positi uye ndokumbira mvumo yavo kuti ndiitumire pasi pezita ravo Nguva imwe neimwe munhu wacho paanenge abvuma uye nekunditenda nekuita chaiko.
Ini handina kuudza kuti ini ndanyora chaiko tsamba ... ini ndangobvunza iwo mubvunzo. Mhinduro yaive yechokwadi, yechokwadi, uye yakagovana ruzivo rwakakosha nevateereri vedu. Mune mamwe mazwi, isu takavharwa mweya uye takapa kukosha kumuverengi. Icho ndicho chirevo chekugara kwevanhu here? Handifungi! Kunyangwe ndichiremekedza Avinash, haasi iye muchengeti wezvinhu zvese zvemagariro pamambure. Gadzira yako pfungwa. Kana zvichibudirira, zviite. Kana zvisiri, usadaro.
Ndakazvitaura ndadzokororazve… munofunga Barack Obama, zvine nharo mumwe wevatauri vakanaka venguva yedu, ndeyechokwadi nekuti haanyore ake ega hurukuro? Isu tinomupopotera here nekumuudza kuti ndiye anopokana nezvose kutaura paruzhinji? Aihwa! Isu tinoziva kuti, semutungamiri wenyika yakasununguka, ane zviwanikwa zvinomubatsira kugadzira hurukuro dzakanyorwa nezwi rake mupfungwa.
Kana iwe usina nguva yekunyora asi iwe uchida kuburitsa iro izwi pane zvigadzirwa zvako kana masevhisi… uye iwe unoshuvira kuve wepachokwadi uye wechokwadi, ghostblogging inogona kunge iri zano rakakura. Ini handisi kutaura zvekuenda nekutenga zvinyorwa online pamashanu madhora pop. Ini ndoda kuve neakanyora-kunyorwa blog posvo iyo yakapa muverengi neruzivo rwavaida kubva kukambani yavaitsvaga… pane zvimwe nekukurumidza, zvinotyisa-zvakanyorwa blog positi kubva kuna CEO pasina iyo nguva.
Uye zvechokwadi, ini handisi kukurudzira kusavimbika. Kana iwe ukapikiswa nezvekuti ndiani arikunyora blog yako, vaudze chokwadi! Yako ghostblogger inokuda nekuda kwayo.
PS: Zvese zvangu zvinyorwa zvemablog zvakanyorwa neni.
Drip Kushambadzira Chikamu 1: Ndiani Anotarisira?